Jasmine : (ထွက်သွားပေးပါ အမုန်းများ) ရင်တွင်းစာ ***
(ထွက်သွားပေးပါ အမုန်းများ) ရင်တွင်းစာ ***
Posted by စံပယ်ချို | Friday, March 25, 2011
အကောင်းမြင်နဲ့ အဆိုးမြင် ဘယ်အမြင်ပိုကောင်းလဲ....
အချစ်နဲ့ အမုန်း ဘယ်ဟာက ကောင်းတာလဲ....
ကြွေကျ မြေခ သစ်ရွက်နဲ့ အပင်ပေါ်က စိမ်းစိမ်းစို သစ်ရွက်
ဘယ် အရွက်က ပိုလှသလဲ......
ဘယ်ညက အရသာ ရှိလဲ...
အချစ်နဲ့ အမုန်း..ဘယ်အရာက သိမ်းထားဖို့ကောင်းတာလဲ...
အဝေးဆုံး နဲ့ အနီးဆုံး...ဘာကိုလိုချင်ပါသလဲ.....
သစ္စာတရား နဲ့ လိမ်ညာခြင်း....ဘယ်အရာကိုရွှေးမှာလဲ....
တိတ်ဆိတ်ခြင်း နဲ့ ဆူညံခြင်း ဘယ်သင်း က ပိုမှာလဲ.......
“ဥပေက္ခာ” ဆိုတာကိုရင်ထဲ မထားပါနဲ့ကွယ်........
jasmine ရဲ့ ပေါက်ကရ အလွမ်း (ကိုယ်တိုင်ရေး) ရင်တွင်းစာ ***
Happy Blog Day *****(Tag Post)
ရေးရပါတော့မယ် ဆရာဦးဟန်ကြည်ကိုလဲ အားနာလှပါပြီရှင် အခု စာပေမိတ်ဆွေ လသာညhttp://latharnya.blogspot.com/ ကလဲ ရေးဖို့ပြောနေပြန်ပြီ.............. ...
ခရီးသွားတဲ့သူတွေကိုအားကျနေရုံသက်သက် ကိုယ်ကဘယ်မှမရောက် ပုံတွေတ၀ကြီးကြည့်ခဲ့ရပြီ
ဘလော့ဂ်ဒေး - ( တက်ဂ်ပို့စ် ) . . .
ပေါက်ကရ ကဗျာ (ဟိုရောက်ဒီရောက်)
ဆုတ်ယုတ်နေတဲ့ခေတ်ထဲ ယုံကြည်ခြင်းတွေ အဟုတ်ထင်ခဲ့တဲ့ ငါ ပလီပလာနဲ့ တီတီတာတာ သူ့စကားကြောင့် ငါ လမ်းတွေမှားခဲ့ရတယ် ကြင်နာခြင်းဆ...
ခုတလော သတိရခြင်းဆိုတဲ့ ချဉ်ခြင်းတက်မှုတွေများနေတယ် တောင်ကြီးအိမ်ကိုသတိရတယ် ပင်စိမ်းသီးထောင်းကိုသတိရတယ် အိမ်ရှေ့က စိန်ပန်းပြာ ပင်ကိုသ...
ဘယ်ဘက် ရင်ဘတ်ထဲက နှလုံးသားပျက်သုန်းခြင်း
အိပ်မရတဲ့ ည ယောင်ရမ်း ကာနိုးနေတဲ့ ည အိပ်မက်တွေခိုးယူခြင်းခံရတဲ့ ည အတွေးတွေ လောင်ကျွမ်းတဲ့ ည အလွမ်းတွေထဲ မှောင်ပိန်း နေ...
တိုးတိုးလေးရွာတဲ့ မိုး ခပ်ကျယ်ကျယ်ရွာခဲ့တဲ့ မိုး ခုတော့ မင်းထွက်သွားရတော့မယ် ၀မ်းမန ည်း ပါနဲ့ကွယ် သူ့အချိန် သူ့ရာသီအတိုင်း လှုပ်...
“အလုပ်မလုပ်ရ သေးတဲ့ နှလုံးသား ” (ဟာသချစ်သူများအတွက်)
ပေါက်ကရ ယောင်တိယောင်ချာ ***အချစ်***
**ဟာသတွေဖတ်ပြီး ရယ်ရအောင် သူငယ်ချင်းတို့ရေ...........
ကူဝိတ်နိုင်ငံတွင် ပြင်းထန်သော သဲမုန်တိုင်း ရုတ်တရက...
ကမ္ဘာတစ်လွား သဘာဝ အလှများ ခံစားနိုင်သော အလှပဆုံး နေ...
***ပေါက်ကရ မဟုတ်တဲ့ အလွမ်းစစ်စစ်*** ကိုယ်တိုင်ရေး(...
မြန်မာငလျင်ကြောင့် သေဆုံးသူ ၇၃ ဦး နှင့် ထိခိုက် ဒ...
ထူးထူးဆန်းဆန်း ခိုးတတ်သော ချစ်စရာ တိရိစ္ဆာန်လေးများ
***တ၀ါးဝါး တဟားဟား ရယ်ကြရအောင်နော်*** (ဟာသချစ်သူမ...
ဂျပ်စတင် ဘီဘာ၏ ဖယောင်း ရုပ်ထု စတင်ပြသ
*ကမ္ဘာပေါ်တွင် အံ့သြဖွယ် ကောင်းလောက်အောင် လှပပြီး ထ...
အာရု၏ အစိမ်းလန်းဆုံးမြို့တော် (စင်ကာပူ)
လှလှပပ ဒီဇိုင်း အမျိုးမျိုးနှင့် စားချင်စရာ ဂျပန်...
*ဒီဇိုင်း အမျိုးမျိုးနှင့် စားချင်စရာ ဂျပန် ဘန်တို...
**အရက်နာကျသူအတွက် အကောင်းဆုံး ဖြေဆေး**
***မတ်လကုန်အထိ လေပြင်းတိုက်နိုင် ***
**ဂျပန်မှာ အားပြင်းငလျင် ထပ်လှုပ်**
**ထူးထူးခြားခြား ခေါင်းနှစ်လုံး ပါသော မြွေအမျိုးမျ...
Dolce & Gabbana ၏ 2011 နွေဦးရာသီ နှင့် နွေရာသီ ...
***အချစ်*** (ရောက်တတ်ရာရာ) အပိုင်း ၂
***နုပျိုလန်းဆန်း တဲ့ အကြည့်***
***အင်းလေးကန် ရေခန်းမှုနှင့် ထပ်မံကြုံနိုင် ***
**ထူးဆန်းအံ့သြဖွယ် ကောင်းသောသဘာဝ သစ်ပင်များ** အပို...
ဂျပန်တွင် အားပြင်းငလျင်နှင့် ဆူနာမီကျရောက်
***Bye Bye ကိုဘယ်လိုများ နုတ်ဆက်မလဲ သူငယ်ချင်း ***
***မျက်ကွင်းညိုဒဏ်ရာနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဆောင်ရန်၊ ရှေ...
**နိုင်ငံတကာ အမျိုးသမီး သတ္တိရှင် ၁၀ ဦး အမေရိကန် ဂ...
*ပုဂံ မှ တန်ခိုးကြီးဘုရားတချို့ ပုံတော်များ*
***ပုံစံအမျိုးမျိုးနှင့် ဆန်းဆန်းပြားပြား သစ်သီးဝလ...
*** နွေရာသီရဲ့ အလွမ်းများ ***
*** သုခ ကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်း ၄ နှစ်ပြည့်ပြီ***
***၂၀၁၁ ရဲ့ နွေဦး ကတော့ ရောက်ရှိလာပါပြီရှင်***
ရှမျးခေါကျဆှဲအတှကျ ကွကျသားဟငျးခကျြနညျး - မာမာ ဒီနတေ့ော့ ရှမျးခေါကျဆှဲထဲမှာ ထညျ့စားဖို့အတှကျ ကွကျသားဟငျး သီးသနျ့ခကျြနညျးလေး တငျပေးခငျြပါတယျ စားမဲ့သူ နညျးပမေဲ့ တဈခါထဲ ခပျမြားမြားလေး ခကျြလ...
စတေနျနှငျ့ဖုနျးပွောဖွဈသောည..... - မိုးနှောငျးကာလ ညကအိုကျစပျပမေယျ့ ဒီညကလှတယျ....... တိမျငှတှေ့ပွေနျ့ကြဲနတေဲ့ ကောငျးကငျမှာ တခွမျးကှေးလလေးက ကပိုကရိုနဲ့ ခွခြေိတျထိုငျနတေဲ့ မိနျးမပြိုလ...
လမျးမမွငျကမျးမမွငျမွနျမွာညျကွီး - မင်ျဂလာပါ တကယျဆိုရငျ မင်ျဂလာမရှိတော့ပါဘူး စိတျဆငျးရဲခွငျးမြားစှာနဲ့မွနျမာနိုငျငံသားတှေ ရငျနာစရာကောငျးလိုကျတာ ကိုဗဈနဲ့ မိတျဆှအေပေါငျးအသငျးတှဆှေမြေိုးတှလေည...
တဈကယျတော့ အိပျမကျဆိုတာ? အပိုငျး (၁) - တိုးတိတျတဲ့ခွလှေမျး တဖွညျးဖွညျးနဲ့ ဝေးသှားခဲ့တာ နာရီဆိုတာမရှိ … စက်ကနျ့ဆိုတာမရှိ သကျမဲ့ခဈြခွငျးတရားတှကေို ဖမျးဆုပျဖို့ မဝံ့ရဲမှတော့ ငေးကွညျ့လှမျးမ...
Updates +++ - နှဈပေါကျအောငျ ပဈထားခဲ့တဲ့ Blog ကို ခဏပွနျလာကွညျ့တဲ့အခါ ကိုယျနဲ့ ရငျးနှီးတဲ့ခံစားခကျြကို မရတော့ဘဲ မဆိုငျတဲ့သူစိမျးနရောတဈခုလို ခံစားနရေတယျ။ ဒီနရောဟာ ဘယျလိ...
Tonight, I cry - Under the lamppostsYellow dim lightProbablyalittle bit of rainShining pavementsThe world was full of hope and wonder.But,Among the many holes that I am u...